Raw Trenbolone Enanthate vovoka mpanamboatra & mpamatsy - Factory
Trenbolone E (Trenbolone enanthate) dia iray amin'ireo steroids izay azo sokajina ho toy ny hery fanampiny izay manampy amin'ny masin'ny muscle. Ny fangatahana eo amin'ny mpanao bakteria dia nitombo nandritra ny taona noho ny fahombiazany tamin'ny fitomboan'ny taovam-pananahana.Tren E (Trenbolone enanthate) no endrika lava indrindra amin'ny toetrolònina ary manana tahan'ny fitandremana maharitra. Manana antsasaky ny fiainana mandritra ny roa ambin'ny folo izy io ary mandray anjara amin'ny hetsika anabolika lava kokoa.
Vovon-tsolotsaina Roul Trenbolone Enanthate (10161-35-8)
Row Trenbolone Enanthate vovoka (10161-35-8) Description
Ny vovon-tsolotsaina Ravin-tsavola Trenbolone, fantatra amin'ny anarana hoe Trenabol, dia singiolary ary nampidiran-drivotra anabolic-androgenic (AAS) sy ny endriky ny nandrolone izay tsy nividianana mihitsy. Io no C17β esanthate ester sy lava-doko lava ny tranbolone. Tsy nampiasaina tamin'ny fikarohana siantifika sy ny veterinera ny tsiranoka Roul Trenbolone Enanthate, saingy ampiasaina amin'ny fikarohana siantifika ary dia amidy amin'ny tsena mainty aterineto ho toy ny designer steroid ho an'ny mpanao biriky sy atleta.
Ny atleta sy ny bakteria dia nampiasa ny vovobony Raw Trenbolone ho toy ny fitsaboana ara-batana sy ny fampiroboroboana fampandrosoana mandritra ny taona maro. Misy tombontsoa maro be toy ny bodibôra amin'ny fampiasana vovobony Raw Trenbolone ho toy ny AAS, satria tombanana ho in-dimy avo lenta kokoa sy matanjaka kokoa noho ny testosterone. Tsy toy ny testosterone, ny vovobony Trenbolone Enanthate dia tsy miteraka tahirin-tsakafo rehefa mahazo vatana. Izany dia ahafahan'ny bodybuilders misimera kokoa, ary izany no mahatonga azy io matetika kokoa ampiasaina rehefa manomana hetsika fifaninanana.
Vovon-tsolotsaina rao Trenbolone (10161-35-8) Specifications
Product Name Vovon-tsolotsaina rao Trenbolone
Anarana simika Trenbolone Enanthate; UNII-FF02TM6THR; FF02TM6THR; 1629618-98-9; Trenbolone Enantate; SCHEMBL634216
molekiolan'ny Formula C25H34O3
molekiolan'ny Wvalo 382.544
mitsonika Point 72-78 ℃
Application Ny vovon-tsolotsaina Roul Trenbolone dia iray amin'ireo steroids mahery indrindra amin'ny anabolika manana fahaiza-manao manatsara ny fahaiza-manao, indrindra ho an'ny atleta sy ny mpambolena. Trenbolone Enanthate vovoka dia mahomby kokoa noho ny testosterone raha ampiasaina araka ny tokony ho izy sy araka ny toro-hevitra.
Inona moa ny vovon-tsolika Roul Trenbolone Enanthate (10161-35-8)?
Trenbolone Enanthate vovoka dia potika anabolika steroid, ary manana 500 fotoana bebe kokoa anabolic sy androgenic steroid than testosterone. Ny voly tranbolona dia ahitana hormone Trenbolone mifandraika amin'ny ester (Enanthate), izay manampy amin'ny fanaraha-maso ny asa hamehana. Trenbolone Enathate vovoka dia ampiasaina indrindra amin'ny tanjon'ny fanabeazana, anisan'izany ny fifehezana sy ny fitrandrahana. Matetika no ampiasaina ho an'ny hogogonadisma voalohany, ny hypogonadism hypogonadotropic, ary ny fahaleovan-tena amin'ny lehilahy, fa amin'ny vehivavy, dia ampiasaina izy io hanasitranana ny homamiadan'ny metasta. Trenbolone Enanthate dia nampiasaina koa ho fanafody fitsaboana any amin'ny biby fiompy mba hampitombo ny fitomboan'ny taovam-pisefoana sy ny fiankinan-doha.
Ahoana ny fomba famonoana vovon-tsolotsaina Raw Trenbolone (10161-35-8) asa
Noho ny vovon-tsolika Trenbolone dia mampiseho ny antsasaky ny androm-piainan'ny 7 - 10 andro ary ankehitriny dia mahazatra kokoa noho ilay mpifankatia lava zoro hafa Parabolan, dia manome mpampiasa maro izay mahatsikaiky sangy matetika na mahita matetika miteraka tsy mety amin'ny endrika tsara kokoa Trenbolone ampiasaina. Raha oharina amin'ny vovony Acetate Trenbolone, izay mitaky andro hafa amin'ny tsindrona farafaharatsiny, ny vovony Trenbolone Enanthate dia mitaky dingana roa isan-kerinandro amin'ny famoahana ny tsimok'aretina tsirairay (alatsinainy sy alakamisy, ohatra). Satria ny tranbolona dia heverina ho ny steroid anabolique avo lenta, ny ankamaroan'ny mpampiasa an'io vondrona io dia mahatsikaritra tsara ny andaniny sy ny atiny. Maro ny intermediate manao ny dingana voalohany mankany Trenbolone dia aleo ny vovony Trenbolone Enanthate noho ny fahatsapana tsindrona matetika. Na izany aza, ny tsy fahampiana izany dia ny hoe ny tranbolone dia steroid anabolic izay mahery vaika ary mitondra azy ireo mety ho voka-javatra hafa tsy hita maso amin'ny zavatra hafa. Izany dia nomena anarana hoe 'steroid' anabolic steroid, ary ny mpandalina ny Trenbolone izay manontany tena hoe iza no mety ho fomba ampiasaina hampiasana ny Trenbolone Acetate. Ny antony mahatonga ny halavan'ny vanim-potoana haingana ao amin'ny Trenbolone Acetate dia mitombo haingana ny tranoben'ny tranbolone ary mihodina haingana, koa ny fiantohana haingana avy amin'ny vatana dia tokony hipoitra ny olana ary te hampitsahatra ilay mpampiasa. Miaraka amin'ny vovoka Trenbolone Enanthate, tapa-bolana ny zavatra takiana mialoha ny Trenbolone dia mazava tsara amin'ny vatana, mandritra izany fotoana izany dia mety mbola mitohy ny ezaka mitranga hafa.
Izany no ilazana ny olona tsirairay hampiasa ity vaovao ity ary hanapa-kevitra ho azy ireo raha toa ka ny lanjan'ny fampidirana lozisiely dia tena mendrika ny tsy maintsy miandry roa herinandro mialohan'ny hidiran'ny zava-mahadomelina amin'ny vatana raha misy fiantraikany ratsy. Raha toa ka mpampiasa za-draharaha momba ny Trenbolone izay efa nahafantatra tsara ny fihetsiky ny vatany ny mpampiasa dia tokony hatao izany fanapahan-kevitra izany.
Vovon-tsolotsaina Rombo Trenbolone (10161-35-8) Dosage
Ny tranbolona enanthate dia matetika ampiasaina ho solika napetraka. Ny doka mahazatra indrindra amin'ny vondrona dia 75 amin'ny 100 mg. Omena azy indroa isan-kerinandro. Ny fe-potoana tokony hampiasaina dia amin'ny herinandro 8.
Vovon-tsolotsaina rao Trenbolone (10161-35-8) soa
Mampirisika ny fihazonana voajanahary
Ny oksizena voatahiry ao anatin'ny hozany dia mitazona ny anabolismana mandeha sy ny kisendrasendra amin'ny halavan'ny tanana. Arakaraky ny ahafahanao mitahiry ny tsaratsara kokoa ary ity dia vokatry ny vovon-tsolotsaina trenbolone - miteraka ny azota mba hijanona ao amin'ny hozatra.
Mampirisika ny Synthese Proteinina
Trenbolone enanthate pointe hitsoka ny peda gazy ary manosika ny famantaranandro proteinina ho amin'ny vitès haingana. Tsy vitan'ny hoe mampirisika ny fitomboan'ny taovam-pananahana izany, fa miaro ihany koa izay manan-danja amin'ny fanolanana sy fanatanjahan-tena.
Na dia io aza dia vokatry ny voly trenbolone enanthate dia tsy mampiseho fa mbola mendrika ny filazana. Tsy misy fiantraikany eo amin'ny estrogenika izay midika fa zero ny fananganana rano ao amin'ny vatana sy ny fandrosoana marina.
Ny sela mena dia ireo mpanondrana amin'ny oksizenina manodidina ny vatana. Tsy lazaina intsony, ny habetsahan'ny sela dia manisa ny oksizenina hafa izay manjary manodidina ny vatana.
Mampitombo hery sy hery
Ny iray amin'ireo vokatra manan-danja be dia be ny trenbolone enanthate dia manana ny zo hidera azy ny fahafahana mampatanjaka anao ary manome anao ny hery lehibe rehetra - haingana!
Ity misy fijery momba ny voka-dratsin'ny olona mety hampiasa bodybuilding amin'ny taranja Trenbolone:
Mihamatanjaka ny heriny
Fiaretana tsaratsara kokoa
Mihabetsaka ny tebiteby
Mihamatanjaka ny fiterahana
Mampirisika ny fanonganana
Reducing in percentage of fat
Tsara ho an'ny cybercurrent
Buy Trenbolone Enanthatepoana avy amin'ny Buyaas.com